Mini AV Wand-AS037 Mini
Ny AV wand, fantatra amin'ny anarana hoe wand massager, magic wand, izay vibrator mandeha amin'ny herinaratra AC / DC. Namboarina tamin'ny voalohany izy io mba hanamaivanana ny fihenjanana sy hampihena ny hozatra marary, nefa malaza indrindra amin'ny fampiasana azy ho kilalao fanaovana firaisana. Ny orinasan-tsarimihetsika japoney dia nitanisa ny fitaovana ary nampalaza ny fampiasana azy ho vi ...
Ahoana ny fampiasana baolina fitiavana?
Ny baolina fitiavana dia fantatra koa amin'ny hoe kegal ball na Ben Wa ball. Ny olona dia mividy azy ireo hampiasaina ho toy ny kilalao fanaovana firaisana sy fanampiana masturbatory na ho fitaovana fampiofanana ampiasaina hanamafisana ny hozatry ny valahana. Afaka manao baolina fitiavana mahazatra ianao amin'ny fotoana rehetra ary amin'ny malina tanteraka, zava-dehibe ny hanginananao ...
Fanombohana vokatra vaovao 2022 avy amin'ny Greenbaby
Misaotra anao amin'ny fijerinao hatrany ny Greenbaby. Mba ho mpanamboatra kilalao ara-nofo lehibe sy lehibe, dia nanam-bola be tamin'ny fandefasana vokatra vaovao izahay. Ny foto-kevitray R&D dia fitaovana ara-tontolo iainana, asa azo ampiasaina ary vidiny mirary. Fampahatsiahivana fotsiny momba ny fikarohana ireo entana vaovao ho an'ny ...
Andron'ny mpifankatia- Ireo kilalao ireo dia azo ampiasaina miaraka amin'ny mpiara-miasa.
Fetin'ny mpifankatia, antsoina koa hoe Fetin'ny mpifankatia na ny Fetin'ny Masindahy Valentine, dia ankalazaina isan-taona amin'ny 14 feb. Nanomboka tamin'ny andro firavoravoana kristiana iray nanaja maritiora kristiana iray na roa voalohany antsoina hoe Saint Valentine ary, tamin'ny alàlan'ny fomban-drazana taty aoriana, dia nanjary zava-dehibe ...
Ahoana ny fomba hisafidianana kilalao lahy sy vavy ho toy ny vao manomboka?
Mety ho safidy sarotra ho an'ny lehilahy vao manomboka. Amin'ny fanadihadiana dia lehilahy maro no nanomboka masturbaion tamin'ny tanana tamim-pisaintsainana na tamin'ny fahitalavitra. Ankehitriny, miaraka amin'ny fanavaozana ny haitao, ny fanovana ny fahatsiarovan-tena, ny fiantsenana an-tserasera mety, manova ny fomba fiainana ny zavatra. Na mitady vokatra hampiasa solo ...
Ahoana no hijanonana fivaviana salama?
Amin'izao fotoana izao dia mihamaro ny olona mifantoka amin'ny fahasalaman'ny fivaviana, indrindra ho an'ireo izay manao firaisana. Ny fahasalaman'ny fivaviana dia ampahany lehibe amin'ny fahasalaman'ny vehivavy amin'ny ankapobeny. Ny olana amin'ny fivaviana dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahavokaranao, ny fanirianao hanao firaisana ary ny fahafahanao mahazo orgasme. Ny olana ara-pahasalamana maharitra eo amin'ny fivaviana dia mety ...
Torohevitra vitsivitsy momba ny peratra filahiana？
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-07-25
Ny peratra filahiana dia matetika ampiasaina mba hahatonga ny filahiana miorina mafy sy lehibe kokoa, hitazona izany toy izany mandritra ny fotoana lava kokoa, ary hampihemotra sy hampitombo ny orgasme. Miasa ny peratra amin'ny fametahana ny rà mandriaka, mitazona ny rà ao amin'ny vatan'ny filahiana. Rehefa mihetsika ny mpitafy farany, ny fahatsapana dia ...
Fijery manokana ho an'ny indostrian'ny firaisana.
Ny niandohan'ny indostrian'ny fanaovana firaisana dia tsy mitovy amin'ny vokatra fiterahana, izay natao hisorohana ny vohoka sy ny aretina azo avy amin'ny firaisana. Ny kilalao ara-nofo dia midika ho vokatra olon-dehibe izay mampiroborobo ny fahafinaretana eo amin'ny lahy sy ny vavy. Eny, ny kilalao fanaovana firaisana dia mbola vaovao amin'ny olon-kafa. Tamin'ny taonjato faha-19, dokotera anglisy iray no namorona electr ...
Greenbaby-ny mpamokatra kilalao fanaovana firaisana ara-nofo sy mpisava lalana
Greenbaby dia orinasa natsangana tamin'ny taona 2007, miaraka amina toby famokarana 30000 metatra toradroa ao amin'ny ozinina manerantany- Dongguan, Sina. Ny orinasan-tsika fototra dia misy fizarana telo: vokatra vita amin'ny lamaody lamaody, vokatra silika maitso ary motera misy endrika vaovao. Greenbaby dia manam-pahaizana manokana izay miara-...
Tombontsoa sy toro-hevitra amin'ny filokana ho an'ny vehivavy
Tombontsoa azo avy amin'ny masturbation Tsara ho an'ny fahasalamanao: mampitombo ny fikorianan'ny rà manerana ny vatanao ny fametavetana ary mamoaka simika amin'ny ati-doha antsoina hoe endorphins. Izany dia mety hanazava ny antony misy ny tombony azo amin'ny fahatsapana mazava, na dia tsy orgasme aza ianao. Rehefa ny lehilahy dia mety miresaka momba ny fipoahan'ny setroka amin'ny filokana, ...
Vibrator mangina avy any Greenbaby
Ny zavatra tena mahavariana dia ny ahiahy sao misy olona maheno feon'akanjo amin'ny alàlan'ny rindrin'ny taratasy mipetaka tao anatin'izay 12 volana lasa izay, nisy zavatra tsara vitsivitsy - saingy ny lafiny iray tsara azo avy amin'ny areti-mandringana dia ny firoboroboan'ny indostrian'ny kilalao ara-nofo. Nandritra ny fandrarana dia nitatitra ireo mpivarotra kilalao fanaovana firaisana ara-nofo fa ...
Firaisana ara-nofo mandritra ny fitondrana vohoka
Milamina ve ny firaisana mandritra ny fitondrana vohoka? Ny ankamaroan'ny ray aman-dreny miandry dia manahy izany, fa raha bevohoka ara-dalàna ianao dia afaka manao firaisana mandra-pahafatin'ny rano. Na izany aza, raha manana vozon-tranonjaza malemy voaporofo ara-pahasalamana ianao, plasenta ambany na mandeha rà, dia tokony manatona ny dokotera na ny mpampivelona ianao ...